किन आउँछ डन्डिफोर ?
प्रकाशित मिति: February 28,2017
डा. शिरपा बज्राचार्य, कन्सलट्यान्ट डर्माटोलोजिस्ट, नर्भिक अस्पताल
छालाको उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामीमध्ये धेरैजसो डन्डिफोरले हैरान पारेको समस्या सुनाउँछन् । डन्डिफोरको समस्या नभोग्ने सायदै होलान् । जीवनकालमा अधिकांश व्यक्तिले डन्डिफोरको समस्या भोगेका हुन्छन् । तर, कतिपयले डन्डिफोरलाई सामान्य ठानेर हेलचेक्राइँ गर्दा गम्भीर समस्या निम्तिएका छन् ।
डन्डिफोरको समस्या लिएर उपचारमा आउने प्रायःजसो महिला हुन्छन् । डन्डिफोर सौन्दर्यसँग जोडिने भएकाले, महिलालाई चिन्ता लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर, कतिपयले आज आएको डन्डिफोर तुरुन्तै भोलिपल्ट निको होस्, अनुहार सफा होस् भन्ने चाहना राख्छन् । त्यसैले केही मानिस डन्डिफोरको उपचारका लागि धेरै डाक्टरकोमा धाउँछन् । पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने, डन्डिफोर तुरुन्तै निको भइहाल्ने हुँदैन ।
सामान्यतया डन्डिफोर आउने बित्तिकै डाक्टरकहाँ गएर उपचार गराइहाल्नु पर्दैन । खासगरी डन्डिफोर किशोर वा युवा अवस्थामा आउनु सामान्य हो । यस्तोमा घरमै छालाको हेरचाह गर्दा हुन्छ । तर छालाको हेरचाह गर्दा पनि डन्डिफोर घटेन, दाग बस्न थाल्यो, झन् ठूलो हुँदै गयो भने चाहिँ चिकित्सककहाँ जानुपर्छ । डन्डिफोरकै कारण मानसिक तनाव पनि बढ्न थाल्छ । यस्तो समयमा छाला सम्बन्धी डाक्टरको सल्लाह अनुसार उपचार गर्नु राम्रो हो ।
सानो डन्डिफोर आएको छ र त्यसले खासै समस्या निम्त्याएको छैन भने घरमै अनुहार सफा गरेर हेरचाह गर्दा हुन्छ । धेरैलाई डन्डिफोर आएपछि धेरैपटक मुख धुनुपर्छ भन्ने भ्रम छ । तर, त्यति धेरै पटक मुख धुनु पनि पर्दैन । आफ्नो छालालाई सुहाउने वा उपयुक्त हुने फेसवासले दिनमा दुई पटक मुख धोए पुग्छ । धेरै गर्मी हुँदा, पसिना आउँदा, अनुहार चिल्लो हुँदा, हेलमेट लगाएर अनुहारमा पसिना आउँदा चाहिँ मुख धुनुपर्छ । चिल्लो, पसिना वा हेलमेटका कारण डन्डिफोर बढ्ने खतरा हुन्छ ।
डन्डिफोर के हो ?
छालामा आउने स–साना राता फोका डन्डिफोर हुन् । सामान्यतया छालाका प्वालमा संक्रमण भयो भने डन्डिफोर देखा पर्छ । छालामा रहेका मसिना प्वालमा अवरोध हुँदा वा संक्रमित हुँदा यो समस्या आउँछ । संक्रमणसँगै हर्मोनका कारणले पनि डन्डिफोर आउने गर्छ । तर, धेरैजसोमा छालाको प्वाल टालिएर हुने संक्रमणका कारण डन्डिफोर आउँछ । छालामा ‘पि–एक्नेस’ भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ । जब छालाको प्वाल चिल्लो पदार्थ, पसिना, धुलो वा फोहोरले टालिन्छ तब उक्त व्याक्टेरिया आक्रामक भएर आउँछन् र डन्डिफोर देखापर्छ । ती ब्याक्टेरियाको संक्रमण बढी भयो भने डन्डिफोरबाट पिपजस्तो फोहोर निस्किन्छ । जब डन्डिफोर बारम्बार देखिन थाल्छ, यसलाई डन्डिफोर बिग्रेको भनिन्छ । यस्तो हुनुका धेरै कारण हुन्छन् । डन्डिफोर बारम्बार आउने भएमा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । बेलैमा उपचार नगरे छालामा नराम्रो दाग बस्न सक्छ ।
किशोरावस्थामा हर्मोनमा हुने परिवर्तनसँग छालाले आफूलाई अनुकूल बनाउन खोज्छ । यद्यपि, धेरै किशोर–किशोरीमा डन्डिफोर बिग्रेर घाउ हुने गर्छ । महिलाको अनुहारमा महिनावारीको समयमा डन्डिफोर बढी आउँछ । महिनावारीको बेला उनीहरूमा हर्मोन परिवर्तन हुने र चिल्लो पदार्थका कारण छालाको प्वाल टालिने हुँदा डन्डिफोर धेरै देखिने गरेको हो । डन्डिफोर बिग्रिएर घाउ हुने अवस्थामा पुग्नुअघि नै उपचार गराउनु उपयुक्त हुन्छ । छाला हाम्रो शरीरका भित्री अंगलाई संरक्षण गर्ने कवच हो । त्यसकारण उक्त कवचलाई जोगाउन विशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
अनुहारलाई चम्किलो बनाउन थरिथरीका केमिकलयुक्त क्रिम तथा सौन्दर्य सामाग्रीहरु प्रयोग गर्दा पनि डन्डिफोर आउन सक्छ । डन्डिफोरलाई सुकाउने नाममा धेरै रसायन भएका ‘मोस्चराइज’, फेसवासको प्रयोगले डन्डिफोर बढाउन मद्दत गर्छ । तसर्थ, छाला सुहाउँदो क्रिम, मोस्चराइज वा फेसवास प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय धेरै युवती अनुहारको छाला जाँच गराएर आफूलाई सुहाँउदो क्रिम तथा अन्य सौन्दर्य सामाग्री प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
तर, ब्युटिपार्लरमा कडा क्रिमले अनुहारको ‘स्क्रब’ गर्दा पनि महिलाको छाला झन् ‘इरिटेड’ भएर समस्या बढेका उदाहरण पनि छन् । छालाको मृत कोष हटाउन गरिने ‘स्क्रबिङ’ एक डेढ मिनेटभन्दा बढी गर्नु हुँदैन ।
डन्डिफोरलाई जबर्जस्ती निचोर्नु हुन्न । यसरी निचोर्दा दाग बस्नुका साथै थप समस्या आउन सक्छ । डन्डिफोरलाई प्राकृतिक रुपमा सुक्न दिनुपर्छ । ठूलो डन्डिफोर छ भने विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ गएर उपचार गराउनु नै उत्तम हुन्छ ।
अनुहारमा डन्डिफोर आएको छ भने सधैँ हात लगिरहने, मुसार्ने गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा हातमा टाँसिएका विभिन्न जीवाणूले समस्या झन् जटिल बनाउँछन् । ब्याक्टेरिया प्रतिरोधक र चिल्लो पदार्थ नभएको साबुन प्रयोग गर्दा डन्डिफोर धेरै हदसम्म कम हुन्छ । तर, छालाको स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त चिल्लो पदार्थ हुनु पनि आवश्यक छ । आवश्यकताभन्दा धेरै सफा गर्दा छाला सुख्खा भएर डन्डिफोर फेरि आउन सक्छ । डन्डिफोर पूरै निको हुन एक महिना पनि लाग्न सक्छ । जति कम निचोर्नु हुन्छ त्यत्ति नै चाँडो समस्या समाधान हुन्छ । प्रसस्त मात्रामा पानी पिउने र सन्तुलित भोजन खानाले पनि डन्डिफोर कम गर्न सकिन्छ ।
कटारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य स्वम्सेविकाहरु संगठित
'ट्रकोमा निवारण भएपनि ढुक्क हुने अवस्था छैन'
जाडो मौसममा चिसोबाट लाग्ने रोगहरु र बच्ने उपाय
जाडोमा चिसोबाट बच्ने उपायहरु जान्नुहोस्